Madaxwaynihii hore ee Puntland Gen. Cadde Muuse oo sheegay inuu ka shaqayn doono isfaham laga gaaro siyaasadda Puntland – Radio Daljir
Madaxwaynihii hore ee Puntland Gen. Cadde Muuse oo sheegay inuu ka shaqayn doono isfaham laga gaaro siyaasadda Puntland
Diseembar 22, 2012 5:27 b 0
Bosaso, Dec 22 – Madaxwanihii hore ee Puntland Gen. Maxamuud Muuse Xirsi Boqor ayaa maanta soo gaaray magaalada Bosaso ee xarunta gobolka Bari, isagoo kasoo kicitamay dalka Imaaraatka Carabta oo uu ku sugnaa bilihii ugu dambeeyey.
Gen. Cadde Muuse oo shirsaxafadeed ku qabtay magaalada Bosaso ayaa sheegay inuu dalka joogay waayadii ugu dambeeysey, aysan ahayn markii ugu horaysay ee uu yimaado Puntland tan iyo markii looga guulaystay doorashadii madaxtinimo ee Puntland Jan,2009-kii.
Madaxwayne Cadde Muuse ayaa sheegay inuu ka qaybqaadan doono soo afjaridda khilaafka siyaasadeed ee dowladda iyo mucaaradka ka dhextaagan, waxaa uu sheegay inuu la kulmi doono issimada, waxgardka iyo dowladda si nabadgalyada looga shaqeeyo.
Mar la waydiiyay sida uu u arko halka sano ee dooda uu ka taaganyahay ayuu Gen. Cadde Muuse sheegay? inuusan diyaar u ahayn jawaab uu arintaasi haatan uu ka bixiyo.
Hoos kadhagayso Shirsaxaafadeedka oo dhamaystiran
M/weynaha Soomaaliya oo kulan la qaatay safiirrada Jaamacadda Carabta iyo Shiinaha ee ku sugan dalka Kenya
Waxgaradka degmada Burtinle oo dhaliilay Faarax Maxamuud Jaamac, iyo gudoomiyaha oo beeniyay eedahaas.